Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » 4 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay Connecticut
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Afar qof ayaa saarnaa diyaaradda, sida la sheegay diyaarad ganacsi oo Cessna Citation ah, sida laga soo xigtay xogta Maamulka Duulista Hawada (FAA).
Diyaaradda ayaa ku dhacday dhismaha warshadaha ee Connecticut.
Dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda Cessna Citation Citation ayaa ku dhimatay shil.
Dab -damiska deegaanka ayaa la tacaalaya dabka uu shilku bilowday.
Kooxaha samatabbixinta ee Farmington, Connecticut ayaa la dagaallamaya dab ka kacay dhisme warshadeed oo maxalli ah kaas oo billowday ka dib markii diyaarad ganacsi oo Cessna Citation ku burburtay dhismaha subaxnimadii Khamiista, taas oo sida muuqata ku dhimatay dhammaan afartii qof ee saarnaa.
Waaxda Booliiska Farmington ayaa xaqiijisay in diyaarad ay ku dhacday dhisme ku yaal Wadada Hyde, waxayna ku sheegtay barteeda twitter -ka in adeegyada gurmadka ay ku jiraan dhulka iyagoo ka shaqeynaya "ka bixitaanka aagga dhow".
Afar qof ayaa saarnaa diyaaradda, sida la sheegay diyaarad ganacsi oo Cessna Citation ah, sida laga soo xigtay xogta Maamulka Duulista Hawada Federaalka (FAA). Midkoodna afartaas midkoodna looma maleynayo inuu badbaaday.
Afar qof ayaa saarnaa diyaaradda, sida la sheegay diyaarad ganacsi oo Cessna Citation ah, sida laga soo xigtay xogta Maamulka Duulista Hawada (FAA). Midkoodna afartaas midkoodna looma maleynayo inuu badbaaday.
Sida laga soo xigtay booliska Farmington, ma jiraan wax dhaawacyo ah oo laga soo sheegay gudaha dhismaha, oo uu leeyahay soo saaraha qalabka Jarmalka ee Trumpf.
Sawirro laga soo qaaday goobta baraha bulshada, waxaa la arkayay qiiq ka baxaya goobta uu shilku ka dhacay, iyadoo shaqaalaha dab -damiska ay la tacaalayaan dabka weyn ee ka qarxay qeyb ka mid ah dhismaha.
Farmington waxay ku taallaa Degmada Connecticut ee Hartford County, qiyaastii 10 mayl (16km) u jirta caasimadda gobolka.